इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति किभ, मस्को भ्रमणमा जाने
गृहपृष्ठ » अन्तर्राष्ट्रिय » इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति किभ, मस्को भ्रमणमा जाने
जाकार्ता । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति एवम् समूह २० का अध्यक्ष जोको विडोडो युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेपछि उत्पन्न आर्थिक तथा मानवीय परिस्थितिबारे छलफल गर्न यसै महिना युक्रेन र रुसको भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
इन्डोनेसियाको बाली टापुमा नोभेम्बरमा हुने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको समूहको शिखर सम्मेलन जाकार्ताले आमन्त्रण गर्ने निर्णयलाई लिएर विवादमा परेको छ । रूसले युक्रेनमाथि युद्ध अपराध गरेकाले उसलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न नहुने समूहका अन्य सदस्यले बताएपछि विवाद बल्झेको हो ।
इन्डोनेसियाले यसवर्ष जी२० को अध्यक्षता गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा केही पश्चिमी देशहरूबाट रुसलाई बैठकबाट बहिष्कार गर्न दबाब परेको छ ।
विडोडोले जुन २६ र २७ मा जर्मनीमा हुने जी२० शिखर सम्मेलनमा इन्डोनेसियाको अतिथि देशको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेपछि किभ र मस्कोको भ्रमण गर्ने र युद्ध सुरु भएदेखि दुवै देशको भ्रमण गर्ने पहिलो एसियाली नेता बनेका परराष्ट्रमन्त्री रेत्नो मार्सुडीले बताएका छन् ।
जब २ बर्षको बच्चाको लिंग अश्वभाविक बढ्यो : रौँ आयो, विर्यपात हुन थाल्यो !
दुई महिना न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर फैसला सुनाउने भारतको सबैभन्दा ठूलो मस्तिष्क चोर
श्रीमान् र श्रीमतीको ब्लड ग्रुप एउटै भएमा के हुन्छ ? कस्तो ग्रुपमा बच्चा जन्माउन मुस्किल ?
वरिष्ठ डाक्टरले छोरीहरुको महिनावारी १०–१२ बर्षमै हुन्छ विवाह योग्य उमेर ११ बर्ष तोकौ भनेपछि…
डाक्टरको एउटै परिवारका ९ जनाको लाश फेला, कसरी भयो यो नरसंहार !
किभ र मस्कोको भ्रमणमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्ने मार्सुदीले बुधबार एक अनलाइन ब्रीफिंगमा भनेका छन् ।
धेरै ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रहरू जस्तै इन्डोनेसियाले युद्धमा तटस्थ स्थिति कायम राख्ने प्रयास गरेको छ र महिनौं लामो द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान गरेको छ ।
विडोडोले मानवीय सहायताको सट्टा जेलेन्स्कीको अनुरोधको जवाफमा युक्रेनलाई हतियार पठाउन अस्वीकार गरेका थिए । इन्डोनेसियाले युक्रेनलाई जी २० शिखर सम्मेलनको अतिथि सदस्यको रूपमा आमन्त्रित गरेको छ । जेलेन्स्कीले भने कि उनी युद्धको स्थितिमा निर्भर गर्दै कम्तिमा भर्चुअल क्षमतामा उपस्थित हुने बताएका छन् । (रासस/एएफपी)
स्नेक आइल्याण्डमा रुसले फोसफोरस बम खसालेको युक्रेनको आरोप
अफगानिस्तानमा दैनिक दुई महिलाले आत्महत्या गर्छन् : पूर्व उपसभामुख
सर्वोच्चको आदेशपछि बन्दुक बोक्न नपाइने
मोदी र पुटिनबीच टेलिफोन संवाद, वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न मोदीको जोड
युक्रेनमा दुई बालबालिकासहित अठार जना मारिए
भारतमा पहिरोमा १४ जनाको मृत्यु, थुप्रै अलपत्र, नेपालीको अवस्था के छ ?
कार दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु
चार बर्षमा इजरालयमा पाँच पटक निर्वाचन : लापिद नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने
हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण भएको २५ औं बर्षमा राष्ट्रपति सी पुगे